Imfashini - le ntokazi inomoya, iyatshintsha. Ngethuba lethu, imfashini ingatshintsha ngokukhawuleza phantse yonke ixesha. Kodwa yintoni imodeli yekhulu lama-19-20 yeenqanda. Ziziphi iintlobo zeembadada ezigqwebileyo, okwenene?
Ekupheleni kwekhulu le-18, i-revolution yenzeke eFransi. Akukho nje kuphela imeko yezopolitiko kweli lizwe nakulo lonke elaseYurophu, kodwa lathintela neefestile. Ngoko phantsi kokuvinjelwa kwakukho izithende zakhe. Abasetyhini abazange bazigqoke ngaphezu kweminyaka engama-50. Izicathulo zabesifazane zeNapoleonic ngexesha lokubonakala kwazo zifana nabadansi be-slippers namhlanje. Ngaloo xesha, ingcamango yokulula indlela yokuphila yayisuswe yonke indawo. Ezi zinto zilula zonke izinto: ubomi, umbono wehlabathi, amasiko, iimpahla kunye nezihlangu. Abantu abaninzi abafilosofi, oogqirha kunye nabantu abaneempembelelo bathetha ngengozi kwimpilo ye-corsets, izicathulo ezinezithende eziphezulu kunye nezicathulo ezincinci kakhulu. Wayephulaphule. Abafazi baseFaris abasebenzisa imfashini baqala ukwenza izicathulo ezincinci, bembethe iingubo zokukhanya kunye nokugqoka izicathulo ezintle kwi-sole. Kodwa u-Napoleon Bonaparte akazange avume ezi zinto zinobuchule. Kwaye ke iingubo ze-crinoline ezinobunzima kunye nokurhola ii-corsets zabuyela kwimfashini kwakhona. Kodwa bayeka izicathulo ezinezithende eziphezulu. Bobabini abesifazana nabesilisa bembatha izihlangu ezenziwe nge-silk, i-velvet okanye isikhumba esithambileyo.
Isikhathi esilandelayo soMkhanyiso asizange sishiye i-foot shoe eceleni. Ephakathi kwekhulu le-19, izicathulo ze-silk ezithambileyo zatshintshwa ngeebhoti ezisebenzayo ezenziwe ngesikhumba esinobukhulu. Ifom iba yomelele ngakumbi, iyanzima. Iimodeli ezingaphezulu kwaye zivela kwiintambo okanye kwiiklasi. Phakathi kweemodeli ezithandwa kakhulu zeengubo zeso sihlandlo, ungabiza i-half-boots kwi-heel-glass glass. Ezi bhotile eziphantsi ezihlotshiswe ngeboya.
Imfashini yekhulu lama-20 yenze iinguqu zayo kwizicathulo. Ngoku izihlangu zigxininisa umxholo wonyawo. Izindlo ezixhasayo zenziwe. Kwiminyaka ye-20 yenkulungwane yokugqibela, izicathulo zazidume kakhulu. Emva kweMfazwe Yehlabathi yesiBini, kwiimeko zokunqongophala jikelele, abenzi beebhulukhwe bazama izinto ezahlukeneyo. Ukukhanya kubonakala kwimizekelo yesikhumba, i-rubber, ivakalelwa, i-polyethylene kunye ne-kapron. Abadlali abancinci, kodwa abaculi abadumileyo kunye nabaqulunqi baqala ukusebenza ekudaleni izicathulo. Kodwa, kungakhathaliseki ukuba yintoni na, izihlangu zahlala zibonakaliso zentlalo. Ngako-ke abahlonipheki bembethe izihlangu ezijoliswe ngokugqithiseleyo ngesithende esicatshulwayo kwaye sincinci ngenyawo.
Zonke iintlobo zezixhobo zisetyenziselwa ukwenza izicathulo: i-satin, isiliki, isikhumba, i-suede. Iibhotshi zenziwe kumaqhosha, kwiintambo, kumateyipu, kwiikhonkco okanye ngaphandle kokuzimela. Amadoda amaninzi ayegqoka amabhuthi okanye ama-shtiblets. Kulo xesha kwakukho neebhotile zesiqingatha.
E-Rashiya imeko yayiyinto eyahlukileyo kuneYurophu. Abagubisi baseRashiya, abasebenza ekuqaleni kwekhulu lama-20, ababizwa ngokuba ngamaqonga. Le nickname abayifumene ngenxa yokuba iiworkshops zabo zazincinci kwaye zigcinwa kude nabantu. I-Masters basebenza njengeengcuka zodwa-ke ngoko igama. Uninzi lweentengiso zeembadada zaseMarti Grove. Apha, abafashini abahambeli nje kuphela kulo lonke elaseRashiya, kodwa nakwamanye amazwe.
Ngokuqhelekileyo, inkulungwane ye-20 ityebile kwizixhobo ezintsha, kubandakanywa nesihlangu. Kwiminyaka emakhulu edluleyo, ezininzi iimpawu kunye neendlela zeesanti zaqulunqwa, njengoko ootata abazange bahlaziye kwixesha elidlulileyo. Iikhompyutha zobugcisa kunye nezinto ezikhoyo ziye zalula inkqubo yokwenza izicathulo. Ukusebenza kwayo kwandisiwe. Namhlanje, ukuthandwa kweso sikhokelo esineemfesi entsha malunga neiveki ezilisithoba. Abaphathi bemihla yesikhangu-mveliso ayinakucatshulwa ngokwenene nayiphi na into. Ngoko ke, banokuqonda nayiphi na ingcamango, nayiphi na ingcamango.
Le ndlela ifana ne-19-20 inkulungwane yeenqanda. Le nto yinto encinci yokwehla kwimbali yezicathulo. Ngokuqhelekileyo, phantse yonke imodeli, zonke izitazi zeesanti zizincinci, kwaye mhlawumbi ibali elikhulu. Imfashini ishintsha njalo kwaye ayayaziwa into eya kucinga engqondweni yabo, kunye noko siza kuvala kwiminyaka embalwa.
Iimbangela ezibalulekileyo zokubambisa abantwana
Ukufezeka kweNdoda: Iintlanu ezintathu ze-autumn ze-laconic-2016
Shish kebab kusuka kwamaphiko enkukhu
Ikhefu le sipinashi
Yimiphi imigaqo yokukhetha umqhubi kumntwana?
Inyanga yesihlanu yobomi bomntwana
Isaladi kwi sipinashi, iinqabileyo kunye neenpine
Patties nge sorrel
Iindidi ze-vitamin masks